कतारको अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा ‘गोरखाका सुवास गुरुङ’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल १२ वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा
..यस्तो हुने हो कि ?? →
डिसेम्बर ५ । आफ्नो परिवारको उज्वल भविष्यको लागि बैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा करीब ६ बर्ष पहिले कतार प्रवेश गरेका गोरखा केराबारी– १, नेपानेका २८ बर्षीय सुवास गुरुङ आफ्नो दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि अहिले हमाद हस्पीटलमा उपचार गराईरहेका छन् । उहॉका अनुसार गत शुक्रबार एक्कासी पेट दुख्ने र ज्वरो आएपछि स्थानिय एक पोलिक्लनीकमा स्वास्थ्य जॉच गराउँदा सो समस्या देखिपछि उनलाई हमाद हस्पीटलमा रिफर गरिएको थियो ।
त्यहॉ कार्यरत एक डाक्टरका परामर्श अनुसार उहॉको दुबै मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने बताए । अथवा हप्तामा तीन पटक डाईलासिस गर्नु पर्ने बताए । यो अति नै खर्च लाग्ने उपचार हो । यो भन्दा अर्को विकल्प नै छैन ।
“कतारमा नै उपचार गराउन अति नै खर्च लाग्ने डाक्टरहरुले मलाई बताए । म नै बिरामी परे पछि कसको आम्दानीले यसको उपचार गर्नु ? मैले यति धेरै पैसा कहॉबाट ल्याउ‘ ?” उनले ऑखाबाट ऑसु खसाल्दै भने– “अब मेरो परिवारको विजोग हुने भयो । देश विदेशमा रहेका नेपाली समुदायका साथीहरुले सहयोग गरिदिए त हुन्थ्यो । बॉकीं आफ्नो जीवन सामाजिक कार्यहरुमा नै लागि पर्थे ।” कतारमा भएका धेरै साथीहरुले सहयोग गर्ने वाचा गर्नु भएको छ । नेपाल तथा लण्डनमा भएका साथीहरुले पनि सहयोगको लागि तयार रहेको कुरा फोन गरेर बताएका छन् । उहॉका अनुसार आफ्नै कम्पनीका पब्लिक रिलेशन अफिसर ईजिप्सियन नागरीक र कम्पनीका मित्रहरुले पनि सहयोग गर्ने कुरा गरेका छन् ।
यस महंगो उपचारको लागि आर्थिक सहयोगको लागि उहॉले आफ्नो नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक चावहिल शाखाको खाता नं. ०१८–०५२८९० A र भोडेओडारमा श्रीमती हरीमाया गुरुङको नाममा रहेको पेसिफिक बैंकको खाता नं. ००२००२०१६२४ NS मा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
बुवा सुकमान गुरुङ र आमा दुरमाया गुरुङका पहिलो सन्तान सुवासका ७ बर्षीय एक छोरा र श्रीमती हरिमाया गुरुङ भने लमजुङ्गको भोडेओडारमा बस्दै आएका छन् । कतारको आपकोन रियल स्टेटमा कार्यरत गुरुङ आफ्नो नियमित विदामा नेपाल गई गत मे महिनामा कतार फर्केका थिए ।